नेपाल आइडलकी रचनाको स्वरमा ‘रुमाल चिनो’ सार्वजनिक – Khabar Silo
नेपाल आइडलकी रचनाको स्वरमा ‘रुमाल चिनो’ सार्वजनिक
काठमाडौं । गायिका रचना रिमालको स्वरमा रहेको गीत ‘रुमाल चिनो’ सार्वजनिक भएको छ । वसन्त सापकोटाको शब्द तथा संगीत रहेको गीतमा स्वर रचना रिमालको छ ।युट्युबमा लिरिकल भिडियो राखिएको गीतको म्युजिक भिडियो केही दिनमा आउने संगीतकार वसन्त
सापकोटाले जनाएका छन् । रचना नेपाल आइडलको जारी सिजन–३ मा उत्कृष्ठ १२ मा प्रतिस्पर्धीका रुपमा छिन् । नेपाल आइडलमा रचनाको गायकी थाहा पाएपछि निर्णायक न्ह्यू बज्राचार्य उनलाई खोज्दै घरमै पुगेका थिए ।
काठमाडौं । प्रभाष र श्रद्धा कपुर स्टारर् ‘साहो’ले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गरिरहेको छ । फिल्म क्रिटिक्सले खासै राम्रो प्रतिक्रिया नदिएपनि ‘साहो’ले दर्शकहरुको राम्रो साथ पाइरहेको छ । ‘साहो’को हिन्दी भर्सनले पनि बक्स अफिसमा उत्कृष्ट कलेक्शन गरिरहेको छ । बक्स अफिस कलेक्शनको मामलामा यो फिल्मले कयौं रेकर्डहरु आफ्नो बनाइसकेको छ । केही दर्शकहरुलाई यो फिल्मको […]
महानायक रा’जेश हमालले चिया पसल सुरु गरे ! हमाल चिया पसल”पिउनेक ओइरो (भिडियोसहित),हेरौं
काठमाण्डौं ।नेपालका चर्चीत महानायक राजेश हमाल, एउटा चिया पसलमा देखिएका छ्न । आ’र्टिस्ट खब’रले लिएको अन्तरवा”र्तामा उनी चिया पसलमा भेटिएका हुन । उक्त चिया पसलमा हमाल आफैंले चिया बेचेको देख्न सकिन्छ । हमाल चिया पसल राखिएको उक्त चिया पसल अहिले सामा’जिक संजालभरी भाइ’रल भइरहेको छ। भि’डियो अन्तिममा छ स्क्रोल डाउन गर्नुहोस.! यो पनि ,,,,नायक रा’जेश […]
सरकारले देशलाई मुलुक पछाडि धकेलिदियो : गगन थापा